notarihin’ny delegen’ny boriborintany voalohany Atoa Bernard Joseph sy ny tale misahana ny asa sosialy eo anivon’ny kaominina ny Dokotera Prisca Andriantseheno. Fianakaviana sivy ireo notolorana fanampiana nahitana kojakojan-dakozia sy fotsimbary. Ankoatra izay dia hanampy ireo mponina tamin’ny fanamorana ny fanamboarana ireo antontan-taratasy izay ilaina amin’ny fiainana andavanandro ny boriborintany voalohany. Mbola ho avy eny an-toerana ireo tompon’andraikitra ara-teknika avy ao amin’ny kaominina hijery ifotony ireo fenitra sy toromarika izay tokony harahina amin’ireo fomba fananganana trano, miaraka amin’izany ihany koa ireo fitaovana fanaovana trano toy ny biriky, fasika, simenitra, tafo. Araka ny nambaran’ny delegen’ny boriborintany voalohany dia fanampiana ihany ireto atolotry ny kaominina Antananarivo Renivohitra ireto fa anjaran’ny tsirairay ny miara-misalahy amin’ny fanorenana. Anisan’ny fijerena ny maha olona sy ao anatin’ny asa sosialy izay efa fanaon’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny asa famonjena ny mpiara-monina tahaka izao. Nofaranana tamin’ny fanentanana ny tsirairay ny mba samy hitandrina sy ho mailo hatrany manoloana ny hain-trano ny hetsika nataon’ny kaominina.